Voafidy ho vodilaharana mendrika i Mombris | NewsMada
Namoaka ireo mpilalao heveriny fa mendrika nandritra ny andro fahatelo sy fahefatra, tamin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny “Can 2022” farany teo ny Bein Sport sy ny Telefoot. Tamin’izany no nisafidianan’izy ireo fa ilay Malagasy, i Jerome Mombris, vodilaharana havian’ny Barea de Madagascar ,no “meilleur lateral africain 2020”. Tsiahivina fa anisan’ireo hidin-trano mahatoky an’ny Malagasy i Mombris. Tsy vitan’ny miaro tena fotsiny ny asany eny ambony kianja fa mahavita manao fanafihana ihany koa izay miafara mihitsy amin’ny daka.
Mpilalao tsotra filalao ary tsy be resaka loatra i Jerome Mombris, na ao amin’ny Barea de Madagascar na rehefa anontanian’ny mpanao gazety. Mpilalao tompon-toerana ao amin’ny FC Grenoble 38, D2 any Frantsa, ny lehilahy ary efa im-38 voaantso tao amin’ny ekipam-pirenena malagasy.
Tsiahivina fa laharana faharoa eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Frantsa ho an’ity sokajy misy azy ity, amin’izao fotoana izao, ny FC Grenoble 38, ilalaovan’i Mombris, manana isa 25, manaraka ny Paris FC, mitarika vonjimaika amin’ny isa 27.